Kuboshwe abasifazane BASEHOPEWELL kwelokudayisa kwezidakamizwa MANDRAX UMGWINYO (Ecstacy) WHOONGA | News24
Kuboshwe abasifazane BASEHOPEWELL kwelokudayisa kwezidakamizwa MANDRAX UMGWINYO (Ecstacy) WHOONGA
BAVELE kafushane enkantolo kamantshi eMgungundlovu abesifazane ababili abasolwa ngokuba ngongqondongqondo bokudayisa izidakamizwa eThornville ngaseHopewell.
Laba besifazane nguNksz Nompumelelo noNontobeko Vilakazi kanti bavele ngoLwesithathu bebhekene necala lokudayisa izidakamizwa zohlobo oluhlekene.
Ukuboshwa kwalaba kwenzeke emva kokuba ithimba lamaphoyisa elaziwa ngelePietermaritzbug Public Order Police ligasele kule ndawo kulandela ukulunywa indlebe ngokudlanga kokusetshenziswa nokwanda kwazo izidakamizwa khona eHopewell. OVilakazi laba kulindeleke ukuthi baphinde bavele kuyo inkantolo kungekude njengoba besagcinwe ngaphakathi.
Okhulumela amaphoyisa uKapteni Musa Ntombela uthe kutholakale izidakamizwa zohlobo lweMandrax eziyi 1 700, kwaphinde kwatholakala nohlobo lwesidakamizwa sephilisi i-Ecstacy, iWhoonga eyizi 2 200 kanye namaphasela ayisithupha ohlobo lwe heroin.
“Amaphoyisa agasele kulo muzi wakule ndawo emva kokuthi abomthetho belunywe indlebe mayelana nokudayiswa kwezidakamizwa. Ingalo yomthetho ibe seyilandela lo mkhondo nokuholele ukuthi kugcine kubanjwe laba besifazane ababe sebeboshwa. Kuphinde kwatholaka namaphilisi ohlobo lweMadrax eyi-1 000 eshaqe yiwo amaphoyisa kanye nabo laba baboshwa labalisa” kusho uNtombela. Uqhube wathi lezi zidakamizwa zilinganiselwa kwinani lika R400 000.
“Kuyasolakala ukuthi laba besifazane lezi zidakamizwa bazidayisela indawo yaseHopewell namaphethelo kanye nendawo yase-Escourt. Siyawancoma kakhulu amaphoyisa ngomsebenzi awenzile kanti futhi lokhu kukhombisa ukuthi amaphoyisa uma ezwe umkhondo ayawulandela.
“Siyawuxunxusa umphakathi ukuthi uma kukhona okusolayo emphakathini utshele amaphayisa, nakanjani amaphoyisa ayobe eselandela lowo mkhondo zibanjwe izigebengu noma abenzi bobubi,” kuqhuba uNtombela.
Ikhansela likawadi 18 uNksz Sindisiwe Gwala, okuyindawo lapho kutholakale khona izidakamizwa, uthe ubengakezwa ngalolu daba. Kodwa ube esencoma umsebenzi wamaphoyisa ngokubopha laba abasolwa ngokwenza okubi. “Siyakuthokozela uma kuwukuthi amaphoyisa abopha abantu abasuke benza ubugebengu endaweni. Lokhu kuyisifundo nakwabanye abasacabanga ukuthi benze ubugebengu.
Noma ubani ocabanga ukuzimbandakanya nobugebengu ngeke akwenze uma amaphoyisa ekhombisa ukulwa nesihlava sabo ubugebengu,” kubeka yena uGwala